မြတ်ပြည့်ဖြိုး – ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com Covering Burma and Southeast Asia Tue, 07 Apr 2020 14:00:53 +0000 en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.3.2 ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်းများအား မန္တလေးမြို့တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် တားမြစ် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/07/220227.html Tue, 07 Apr 2020 14:00:53 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=220227
ကချင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်၊ မြောက်)တို့မှ ပဲခူးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းသို့ သွားရောက်မည့် ခရီးသည် တင်ယာဉ်လိုင်းများသည် မန္တလေးမြို့တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုရဘဲ သတ်မှတ်ထား သော လမ်းများမှသာ သွားရမည်
The post ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်းများအား မန္တလေးမြို့တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် တားမြစ် appeared first on ဧရာဝတီ.
ရောဂါကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှ ဖြတ်သန်းကာ အခြားဒေသများသို့ ပြေးဆွဲသည့် ခရီးသည် ယာဉ်လိုင်း အားလုံး မန္တလေးမြို့ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုဘဲ ရှောင်ကွင်းလမ်းမှသာ သွားရောက် ခွင့်ပြုကြောင်း မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ဧပြီ ၆ ရက်က တားမြစ်မိန့် ထုတ်ပြန်သည်။
မန္တလေးတိုင်း အဝေးပြေးခရီးသည်တင် ယာဉ်လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်လင်းက “မန္တလေးမြို့ထဲကိုတော့ ဘယ်ယာဉ်လိုင်းမှ မဝင်ရ ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်လိုင်းတွေကိုလည်း မနေ့ကတည်းက အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ယာဉ်လိုင်းတွေအတွက် သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကပဲ ပတ်ပြီး ဖြတ်သန်းသွားရမှာပါ” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ကချင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်၊ မြောက်)တို့မှ ပဲခူးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းသို့ သွားရောက်မည့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်းများသည် မန္တလေးမြို့တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုရဘဲ သတ်မှတ်ထားသော လမ်းများမှသာ သွားရမည်ဟု ပါရှိသည်။
အသေးစိတ်မှာ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းတို့မှ လာသော ခရီးသည်တင်ယာဉ်များသည် တံတားဦးမှတဆင့် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းအတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းသို့ လည်းကောင်း၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် မကွေးတိုင်းတို့မှ ခရီးသည် တင်ယာဉ်များသည် ပခုက္ကူ-ကျောက်ပန်းတောင်းမှတဆင့် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းအတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းသို့ လည်းကောင်း သွားရောက်ရမည် ဖြစ်သည်။
အလားတူ ကယားပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)မှ လာပါက ပျော်ဘွယ်(ဘုရားငါးဆူ)မှ တဆင့် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း အတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းသို့ လည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)မှ လာပါက ပြင်ဦးလွင်-တံ တားဦး အဝိုင်းမှတဆင့် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းအတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းသို့ လည်းကောင်း အထက်ပါ သတ်မှတ် လမ်းများအတိုင်း မန္တလေးမြို့အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုဘဲ သွားလာရမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
ဧပြီလ ၇ရက်နေ့မှ၂၁ရက်နေ့အထိ မန္တလေးမြို့သို့ အဝင်အထွက်ပြုလုပ်နေသည့် ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်လိုင်းများနှင့် အဝေးပြေးကားကွင်းများကို ယာယီပိတ်ထားလိုက်သည်(ဇော်ဇော်/ဧရာဝတီ)
ရွှေမန္တလာ အဆင့်မြင့် ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေးမှ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးနေလင်းဦးက “အစတုန်းကတော့ မန္တလေး တိုင်းအတွင်း ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်းတွေ ဖြတ်လို့မရဘူးလို့ ကြေညာလိုက်တော့ ဦးတို့က ယာဉ်လိုင်းတွေ အားလုံး နားပစ်လိုက်တယ်။ အခုကတော့ ပြန်ဖြေလျှော့တဲ့ သဘောနဲ့ မန္တလေးမြို့တွင်းပဲ မဖြတ်ရဘူးလို့ အစိုးရက ပြန်ထုတ် ပြန်လိုက်တယ် ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဝန်ထမ်းတွေရော၊ ကားသမားတွေရော အကုန် နားပေးထားတဲ့အတွက် ဦးတို့ ယာဉ်လိုင်းကတော့ ဒီလ ၁၉ ရက်မှ ပြန်စ ပြေးဆွဲမယ်” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ဒေသတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအား ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဒေသန္တရဆိုင်ရာ အမိန့်များကို ထုတ်ပြန် ကြေညာလျက်ရှိရာ မန္တလေးတိုင်းအတွင်းသို့ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအတွက် ဝင်ထွက်နေသော ကုန်တင်ယာဉ်များနှင့် သာမန် အိမ်စီးကားများ(ယာဉ်မောင်း အပါအဝင် ၇ ဦးထက် မပိုသော) မှအပ ကျန်ရှိသော ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်လိုင်းများ အားလုံး၊ ဘုရားဖူးနှင့် အပန်းဖြေ ခရီးသွားယာဉ်၊ အလည်အပတ် သွားရောက်သည့် ယာဉ်များအားလုံး မန္တလေးတိုင်းအတွင်းသို့ ရှောင်ကွင်းလမ်းများမှအပ ဝင်ထွက် သွားလာခွင့်အား ဧပြီ ၇ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ ခေတ္တ ယာယီ ကန့်သတ်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းအစိုးရက ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့ပြင် လက်ရှိတွင် မန္တလေး အခြေစိုက် ပြေးဆွဲသော ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်း အားလုံးအပြင် မန္တလေးမြို့တွင်းရှိ အဝေးပြေးကားဝင်း ၅ ခုလည်း နှစ်ပတ်ကြာ ပိတ်ထားပြီး ဖြစ်သည်ဟု တိုင်းအဝေးပြေး ခရီးသည်တင်ယာဉ် လုပ် ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီက သိရသည်။
]]> ကျန်းမာရေးထုတ်ပြန်ချက် မလိုက်နာသည့် ပန်တော်ဦးယာဉ်လိုင်းအား ပြေးဆွဲခွင့် ပိတ်သိမ်း https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/02/219876.html Thu, 02 Apr 2020 13:32:46 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=219876
လုပ်ငန်း လုပ်စရာရှိတာ ပြီးစီးအောင် ဆက်လုပ်ပေးရမှာပေါ့။ လက်ခံထားတဲ့ကုန်၊ လက်မှတ်ဖြတ်ထားတဲ့ ခရီးသည်တွေရှိမယ်။ အဲဒါတွေကို အခက်အခဲ မဖြစ်ဖို့ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ကျနော်တို့ စီစဉ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ကျန်းမာရေးထုတ်ပြန်ချက် မလိုက်နာသည့် ပန်တော်ဦးယာဉ်လိုင်းအား ပြေးဆွဲခွင့် ပိတ်သိမ်း appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ခရီးသည် တဝက်တင်၍ ယာဉ်စီးခ ၂ဆ ယူရန် မန္တလေးတိုင်းအစိုးရ ကြေညာ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/30/219521.html Mon, 30 Mar 2020 11:29:51 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=219521
COVID-19 ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် မန္တလေးတိုင်းအတွင်း အခြေစိုက် ထွက်ခွာမည့် ခရီးသည်တင် ယာဉ် လိုင်းများ အားလုံး ယာဉ် ၁ စီးတွင် ခရီးသည် အရေအတွက် ထက်ဝက်သာ တင်ဆောင်ရန်နှင့် လက်ရှိ ယာဉ်စီးခနှုန်း ၏ ၂ ဆ ဖြင့် ရောင်းချရန် မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က မတ် ၂၈ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။
The post ခရီးသည် တဝက်တင်၍ ယာဉ်စီးခ ၂ဆ ယူရန် မန္တလေးတိုင်းအစိုးရ ကြေညာ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> မန်းတိုင်းသို့ ပြည်ပမှ ရောက်လာသူတိုင်း Facility Quarantine မဖြစ်မနေ ဝင်ရမည် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/27/219312.html Fri, 27 Mar 2020 10:01:49 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=219312
မည်သည့်ပြည်ပနိုင်ငံမှမဆို မန္တလေးတိုင်းသို့ လာရောက်ပါက Facility Quarantine မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး မလိုက်နာပါက အရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်း တိုင်း ခေတ္တဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇာနည်အောင်က ပြောသည်။
The post မန်းတိုင်းသို့ ပြည်ပမှ ရောက်လာသူတိုင်း Facility Quarantine မဖြစ်မနေ ဝင်ရမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
မည်သည့်ပြည်ပနိုင်ငံမှမဆို မန္တလေးတိုင်းသို့ လာရောက်ပါက Facility Quarantine (သတ်မှတ် နေရာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်မှုခံယူခြင်း) မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး မလိုက်နာပါက အရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ခေတ္တဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇာနည်အောင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“မန္တလေးတိုင်းကို ပြည်ပဘယ်နိုင်ငံကနေပဲ ရောက်လာလာ၊ ရောက်လာသူအားလုံး Facility Quarantine ၁၄ ရက် မဖြစ်မနေ ဝင်ကိုဝင်ရပါမယ်။ မဝင်ရင် ကူးစက်ဥပဒေနဲ့ အရေးယူပါမယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ မတ်လ ၂၇ ရက် နံနက်အစောပိုင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ နိုင်ငံခြားမှ ပြန်ရောက်သော မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦး၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိရ၍ ယနေ့အထိ စုစုပေါင်း ကိုဗစ်လူနာ ၅ ဦးရှိပြီး အဆိုပါလူနာအားလုံးသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်အတွင်းက အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတို့မှ ရောက်ရှိလာသူများဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
၎င်းတို့အနက် မတ်လ ၂၇ ရက်နံနက်က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါဝင်သော အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ် လူနာအမျိုးသားသည် လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်အတွင်းက အမေရိကန်နိုင်ငံမှ မန္တလေးသို့ ရောက်ရှိခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးဖြစ်သည်။
အဆိုပါလူနာသည် မန္တလေးတွင် ပထမဆုံးတွေ့ရှိသည့် ကိုဗစ်လူနာဖြစ်ပြီး ကန်တော်နဒီ ဆေးရုံ၌ ထားရှိကာ ဆေးကုသမှုများဆောင်ရွက်နေပြီး ၎င်းသည် အဆုတ်ရောင်ရောဂါလက္ခဏာ ခံစားနေရပြီး ရောဂါအခြေအနေ အရမ်းမပြင်းထန်ကြောင်း မန္တလေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာစုစုဒွေးက ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီက ဧရာဝတီသတင်းဌာနအား အတည်ပြုပြောကြားထားသည်။
အထက်ပါအခြေအနေများကြောင့် မန္တလေးတိုင်းအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအား ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လာရောက်သူများအားလုံး မဖြစ်မနေသတ်မှတ်နေရာတွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ကြည့်မှုခံယူရမည်ဖြစ်ကာ မလိုက်နာပါက အရေးယူမည်ဟု ခေတ္တဝန်ကြီးချုပ်က ဆိုသည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ် ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအရ ပြည်ပမှ ပြန်ရောက်လာသူများအနေဖြင့် ထိုသို့ကျန်းမာရေးအရ အသွားအလာကန့်သတ်မှုအား ငြင်းဆန်ပါက ထောင်ဒဏ် ၆ လ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်ငွေ ၅ သောင်းဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်ဟု ပြဌာန်းထားသည်။
လက်ရှိတွင် မန္တလေးတိုင်းအနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာအပါအဝင် စောင့်ကြည့်၊ သံသယလူနာများအတွက် ကန်တော်နဒီဆေးရုံ၊ နဒီမြန်မာဟိုတယ်တွင်သာမက သာသနာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ ဖြစ်သော ရိပ်သာများ၊ ပညာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်ရှိအဆောင်များတွင် နေရာများ ပြင်ဆင်ထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“လောလောဆယ်အရ Lockdown လုပ်ဖို့ မလိုသေးပေမယ့် အဲဒီအခြေအနေ မရောက်သွားအောင် ပြည်သူ အားလုံး ဝိုင်းဝန်းပေးကြပါ” ဟု တိုင်းခေတ္တဝန်ကြီးချုပ်ဦးဇာနည်အောင်က မေတ္တာရပ်ခံသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကာကွယ်ရန်အတွက် ယခုသီတင်းပတ်မှစတင်ကာ မန္တလေးတိုင်းအတွင်း လူစုလူဝေး ဖြစ်စေမည့် ပွဲလမ်းသဘင်များ ကျင်းပခြင်း၊ လူစည်ကားသော မန္တလေးကျောက်ဝိုင်းအား ယာယီပိတ်ခြင်း၊ နိုက်ကလပ်၊ စင်တင်၊ ဘား၊ ကေတီဗီများအား ယာယီပိတ်ရန်နှင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များအပါအဝင် စားသောက်ဆိုင်များတွင် ပါဆယ်စနစ်ဖြင့်သာ ရောင်းချရန် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ဒေသဆိုင်ရာစည်းကမ်း သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည်။
သို့သော် လက်ရှိအနေအထားအရ အများပြည်သူ၏ စားဝတ်နေရေး၊ လူမှုစီးပွားရေးတို့အတွက် ဈေးချိုအပါအဝင် ဈေးများပိတ်ခြင်းအား မပြုလုပ်သေးဘဲ အခြေအနေအရ လိုအပ်သည်များအား ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ ကျော်တွင် ကူးစက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး ကူးစက်ခံရသူ ၄ သိန်းနီးပါးနှင့် သေဆုံးသူ ၂သောင်းနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
]]> မန္တလေးတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိ လူနာ စတင်တွေ့ https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2020/03/27/219282.html Fri, 27 Mar 2020 03:06:43 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=219282
ကန်တော်နဒီဆေးရုံသို့ စောင့်ကြည့်လူနာ အဖြစ်မရောက်ခင်အထိ ၎င်းသွားရောက်အသုံးပြုခဲ့သော နေရာ များ၊ ယာဉ်များစသည်တို့မှာ များပြားသဖြင့် အများပြည်သူအတွက် ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းပိုများနိုင်သဖြင့် မန္တလေးမြို့ ခံများအကြား စိုးရိမ်မှုများရှိနေသည်။
The post မန္တလေးတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိ လူနာ စတင်တွေ့ appeared first on ဧရာဝတီ.
မန္တလေး ကန်တော်နဒီဆေးရုံတွင် တက်ရောက်နေသည့် စောင့်ကြည့် သံသယ လူနာတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တွေ့ရှိရကြောင်း ယနေ့နံနက်အစောပိုင်းက ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အဆိုပါ ပိုးတွေ့ လူနာမှာ မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်သို့ လာရောက်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ခံယူ ထားသော ၃၃ နှစ်အရွယ် မြန်မာအမျိုးသားဖြစ်ပြီး မတ်လ ၁၉ ရက်ကတည်းက အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ သူဖြစ် သည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
ယင်းလူနာသည် မတ်လ ၂၂ရက်မှ စတင်၍ ဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် မောပန်းခြင်း လက္ခဏာ များ ခံစားခဲ့သဖြင့် မတ်လ ၂၅ ရက်တွင် မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ လာရောက် ပြသခဲ့ရာ ကန်တော်နဒီဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်း၍ စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် ၎င်း၏ဓာတ်ခွဲနမူနာအားရယူပြီး အမျိုးသား ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) သို့ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ရာမတ်လ ၂၇ ရက်တွင် စစ်ဆေးခဲ့သည့် ဓာတ်ခွဲအဖြေအရ COVID-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရသည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါလူနာသည် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ရန်ကုန်မြို့သို့ မတ်လ ၁၉ရက် ညနေ ၆နာရီတွင် Qatar လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်တွင် တစ်ညအိပ်နေထိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ယင်းနောက် မတ်လ ၂၀ ရက် ည ၁၀ နာရီ ခိုင်မန္တလေး အဝေးပြေးမှန်လုံယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်မှ မန္တလေးသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အဝေးပြေးကားဂိတ်မှ ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ်ရှိ ၎င်း၏နေအိမ်သို့ မီနီအိုးဝေအငှါးယာဉ်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် ကူးစက်မြန်ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင် ရောဂါဖြစ်သဖြင့် လူနာ၏ လွန်ခဲ့သော၂ ပတ် အတွင်း ခရီးသွားရာဇဝင်များအရ မြန်မာနိုင်ငံသို့စတင် ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည့် အချိန်မှ ကန်တော်နဒီဆေးရုံသို့ စောင့်ကြည့်လူနာ အဖြစ်မရောက်ခင်အထိ ၎င်းသွားရောက်အသုံးပြုခဲ့သော နေရာများ၊ ယာဉ်များစသည်တို့မှာ များပြားသဖြင့် အများပြည်သူအတွက် ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းပိုများနိုင်သဖြင့် မန္တလေးမြို့ခံများအကြား စိုးရိမ်မှုများရှိနေသည်။
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ မတ်လ ၂၇ ရက်နံနက်အစောပိုင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိလူနာ ၅ဦး ရှိပြီဖြစ်သည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ ကျော်တွင် ကူးစက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး ကူးစက်ခံရသူ ၄ သိန်းနီးပါးနှင့် သေဆုံးသူ ၂သောင်းနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
]]> COVID-19 ကြောင့် အထိနာခဲ့ရသည့် မြန်မာ့ခရီးသွားကဏ္ဍ https://burma.irrawaddy.com/article/2020/03/26/219249.html Thu, 26 Mar 2020 11:06:54 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=219249
COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုသည် အားနည်းနေသော ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအား ပိုမိုချိနဲ့စေရန် အကျဘက်သို့ ဦးတည် စေသော ခြိမ်းခြောက်မှု အသစ် ၁ ခုလည်း ဖြစ်လာသည်ဟု ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့က ပြောဆိုထားသည်။
The post COVID-19 ကြောင့် အထိနာခဲ့ရသည့် မြန်မာ့ခရီးသွားကဏ္ဍ appeared first on ဧရာဝတီ.
ကမ္ဘာကပ်ရောဂါ COVID-19 သည် မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ ဝန်းကျင်တွင် တပြိုင်တည်း ဖြစ်ပွားနေမှု ကြောင့် ခရီးသွားကဏ္ဍသည် အခက်ခဲဆုံးအချိန် ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (UNWTO) က ယခုလ ပထမပတ်က ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံ ပြည့်စုံမှု အားနည်းနေသေးသော မြန်မာအတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဲ့သို့ မီးခိုး မထွက်သော စက်ရုံများ တည်ထောင်ကာ တိုင်းပြည် ဝင်ငွေတိုးရန် အစိုးရတွင် ဆန္ဒရှိသော်လည်း လက်ရှိ အခြေ အနေအရ မြန်မာသာမက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီး၏ ခရီးသွားကဏ္ဍသည် ကပ်ဆိုက်နေချိန် ဖြစ်သည်။
“ဒီလထဲမှာ ဟိုတယ် တော်တော်များများ လက်ခံထားတဲ့ ဘွတ်ကင်တွေ အားလုံး ပျက်သလောက် ဖြစ်နေတယ်။ တချို့ဟိုတယ်တွေက ဧည့်သည် မရှိတော့တဲ့အတွက် ပိတ်သိမ်းရမယ့် အခြေအနေမျိုး ကြုံနေကြပြီ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (မန္တလေးဇုန်)၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမင်းနိုင်က ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီမှ စတင်၍ မန္တလေးဇုန်အတွင်းက ဟိုတယ်အများစုသည် ကြိုတင် စာရင်း ပေးထားသော အခန်းများ ပြန် လည် ပယ်ဖျက်ခြင်း ကြုံနေရသလို မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန် စာရင်းပေးထားသော ခရီးစဉ်အများစု ပြန်လည် ပယ်ဖျက်ခြင်းများ ရှိသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (မန္တလေးဇုန်) ၏ အတွင်းရေးမှူး ဦးသန့်ဇော်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ခရီးစဉ် ပယ်ဖျက်မှုများသည် တရုတ် အပါအဝင် အာရှနိုင်ငံများ သာမက အနောက်ဥရောပနှင့် အရှေ့အလယ် ပိုင်းဒေသ နိုင်ငံများမှ ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ခရီးသွားကဏ္ဍရဲ့အဆိုးဆုံး အခြေအနေကို ရောက်နေပြီလို့ ပြောလို့ရမယ်။ လုပ်ငန်းရပ်တည်ဖို့ ဘယ်လောက် အထိ တောင့်ခံထားနိုင်မလဲ၊ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေကိုရော ဘယ်လောက်အထိ အလုပ် ပေးထားနိုင်မလဲ ဆိုတာ အချိန်နဲ့အမျှ တွေးနေရပြီ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (မန္တလေးဇုန်)၏ အတွင်းရေးမှူး ဦးသန့်ဇော်က ဆိုသည်။
ထိုသို့ ညည်းတွားမှုမှာ ဦးသန့်ဇော် တဦးတည်း မဟုတ်ပေ။ ခရီးသွားကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသူ အခြေခံ အဆင့် ရှိ တောင်သမန်အင်းမှ ငှက်လှေသမား၊ ပုဂံမြင်းလှည်းဂိတ်မှ မြင်းလှည်းသမားများ အပါအဝင် ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကြီးများ အထိ ဖြစ်သည်။
တောင်သမန်အင်းသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် တရုတ်ခရီးသွားများ(ဇော်ဇော်၊ ဧရာဝတီ)
ပုဂံဒေသမှ မြင်းလှည်းဆရာ ကိုဝင်းမြင့်ဦးက “ကျနော်တို့ဒေသက ဒီတိုးရစ်တွေနဲ့ပဲ စီးပွားရှာရတာလေ။ သူတို့လာမှ အဆင်ပြေတာလေ။ အခု သူတို့ မလာကြတော့ ကျနော်တို့ ဘာလုပ်စားရမလဲဆိုတာ မတွေးတတ်တော့ဘူး” ဧရာဝတီ ကို ပြောပြသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သော နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည် ၄ ဒသမ ၄ သန်း ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ကိုရိုနာဂယက်ကြောင့် ခရီးသွားဝင်ရောက်မှု ထက်ဝက်အထိ ကျဆင်းသွားနိုင်မည့် အနေအထားတွင် ရှိသည်ဟု ပြည်ထောင်စု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ဒုဝန်ကြီး ဦးတင်လတ်က ဧရာဝတီကို ခန့်မှန်း တွက်ချက်ပြသည်။
ဝန်ကြီး ခန့်မှန်းပြသလို ပြီးခဲ့သော ဖေဖော်ဝါရီလ၌ မန္တလေးတိုင်းသို့ ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုသည် ဇန်နဝါရီလနှင့် နှိုင်း ယှဉ်ပါက ထက်ဝက်နီးပါး လျော့ကျသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏ စာရင်းများ က ဖော်ပြနေသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီက မန္တလေးတိုင်းသို့ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ၇ သောင်းကျော် ဝင်ရောက်ခဲ့သော်လည်း ဖေဖော် ဝါရီတွင်မူ ၃၈၀၀၀ ကျော်သာ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ဟု အထက်ပါဌာန၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။
“လက်ရှိ အခြေအနေတွေ အရ နောက်လလောက်ဆို ဇီးရိုးအထိ ကျသွားနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းနေရပြီ။ ဒီလိုဖြစ်လာတာ ဟာ ခရီးသွားကဏ္ဍအပေါ် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ ဆက်စပ်နေကြတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အားလုံး ထိခိုက်နစ် နာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု မန္တလေးတိုင်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးစန်းယုက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ကမ္ဘာ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ခန့်မှန်းချက်အရ တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာအရ နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားဧည့်သည် အခြေအနေသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ၁ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းနိုင်မည်ဟု ဆိုထားသည်။
ထိုသို့ အကျပ်အတည်းများကြောင့် ခရီးသွားကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများ အားလုံးသည် ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန် ဖြင့် ဖြေရှင်းရသည့် အချိန်ကျလာပြီဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ခရီးသွားအေဂျင်စီ၊ ရိုးရာ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အစရှိသော လုပ်ငန်းများ သာမက တဦးချင်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးရသော ဧည့်လမ်းညွှန်များလည်း အပါအဝင် ဖြစ်သည်။
ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်နှင့် ခရီးသွားအေဂျင်စီများတွင် ဝန်ထမ်းအင်အား လျှော့ချခြင်း၊ လစာမဲ့ ခွင့်ပေးခြင်း၊ လစာ တဝက်ဖြင့် ခေတ္တအနားပေးခြင်း၊ နေရပ်ပြန်ပို့ခြင်း၊ နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်များအား လျှော့ချ နိုင်သမျှ လျှော့ချခြင်း စသည် တို့ကို ကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန်ဖြင့် စတင် ဖြေရှင်းကြပြီ ဖြစ်သည်။
ထို့အတူ တဦးချင်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးရသော ဧည့်လမ်းညွှန်များအပြင် အခြေခံ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသော မြင်းလှည်း၊ ငှက်လှေမောင်းသူများသည်လည်း မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် လက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်မှ တခြားသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်များသို့ ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ရန် စီစဉ်ကြရလေသည်။
“ဧည့်လမ်းညွှန် ဆိုတာက ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှု ရှိကြတော့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း ဖွင့်တာမျိုး၊ အချိန်ပိုင်း စကားပြန် လုပ်တာမျိုး လုပ်တယ်။ တချို့ကျတော့လည်း မိဘလက်ငုတ်လက်ရင်း အလုပ်တွေကို ဝင်လုပ်ကြတယ်။” မန္တလေးမြို့ခံ ဧည့်လမ်းညွှန် ကိုစိုးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“သဇင်ပန်း” မြန်မာရိုးရာအမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင် မစုမွန်တိုးကလည်း “နိုင်ငံခြားသား မလာတော့ ရောင်းအားကတော့ ထိုးကျသွားတယ်။ ဒါကြောင့် ညီမတို့ လုပ်ငန်းက လက်မှုလည်း ဖြစ်တော့ ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းကို ထိန်းထားနိုင်ဖို့အတွက် Local ဈေးကွက်ကို ဦးတည်ပြီး ပြန်ဖောက်နေရတယ်” ဟု ပြောပြသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဖြစ်ပွားမှုသည် မတ်လ ၂၅ ရက် နံနက်အစောပိုင်းအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တွေ့သူ ၃ ဦး ရှိကာ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် ကူးစက်ခံရသူ ၃ သိန်း၃ သောင်းကျော်နှင့် သေဆုံးသူပေါင်း ၁ သောင်း ၄ထောင်ကျော်လာ ပြီ ဖြစ်သည်ဟု ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့ကြောင့် ရောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်း မြင့်မားသော နိုင်ငံများအလိုက် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာများ ကန့်သတ်ချက်များအား အစိုးရ ထုတ်ပြန်လျက် ရှိသလို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ အနေဖြင့် လေယာဉ်ပေါ် မတက်မီ လွန်ခဲ့သော ၇၂ နာရီမတိုင်မီက ရရှိထားသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကင်းရှင်းကြောင်း ဓာတ်ခွဲခန်း ဆေးစစ်ချက် အထောက်အထား ပြသရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိပါက ၁၄ ရက် သီးသန့် ကျန်းမာရေး စောင့်ကြည့် မှု (Facility Quarantine) ခံယူရမည်ဟု မတ်လ ၂၄ ရက်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်သည် မတ်လ ၂၅ ရက်မှ စတင်အသက်ဝင်ပြီ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ခုနှစ်က ပုဂံသို့ လာရောက်သည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ(ဇော်ဇော်၊ ဧရာဝတီ)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် အတွက် မြန်မာ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးတွင် ထိုသို့သော နိုင်ငံခြား သား ခရီးသွား ဝင်ရောက်မှုများအား ကန့်သတ်လျက် ရှိသလို ၎င်းရောဂါ ကူးစက် ဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေသည် မည့် သည် ကာလတွင် ပြီးဆုံးလိမ့်မည်ဟု ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ အပါအဝင် မည်သူမှ ခန့်မှန်းနိုင်သည့် အနေအထား မရှိ သေးပေ။
“ဒီကာလကြီးက ဘယ်လောက်အထိ ကြာမယ်ဆိုတာ မခန့်မှန်းနိုင်တော့ ဘယ်လောက်အထိ တောင့်ခံနိုင်မလဲဆိုတာ ပြောရခက်တယ်။ တောင့်မခံနိုင်တဲ့ဆိုင်တွေလည်း ပိတ်လိုက်ရုံအပြင် ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက် ဆိုင် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (မန္တလေးဇုန်)၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသင်္ကြန်ကျော်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မတ်လ ၁၆ ရက်က နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကိုဗစ်ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ မိန့်ခွန်းတွင် ကိုဗစ်ကြောင့် ထိခိုက်မှု အများဆုံး ကြုံတွေ့နိုင်မည့် လုပ်ငန်းများအား အထူး သက်သာသော အတိုးနှုန်းဖြင့် ငွေချေးရန် စီမံသွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းများတွင် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်း သူက ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကိုဗစ်ကြောင့် ထိခိုက်မှု အများဆုံး ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများအနက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း အပါအဝင် CMP အထည်ချုပ် လုပ်ငန်း၊ အသေးစား အလတ်စား စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများအား ဦးစားပေး၍ ကျပ် ဘီလီယံ ၁၀၀ မတည်ကာ ၁ ရာခိုင်နှုန်း အတိုးနှုန်းဖြင့် သက်တမ်း ၁ နှစ် ချေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မတ်လ ၁၈ ရက်က အစိုးရက ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
ထို့အတွက် ခရီးသွားကဏ္ဍရှိ သက်ဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များက ချေးငွေ ရယူလိုသူများ၏ စာရင်း အချက်အလက်များ အား စတင်ကောက်ယူနေပြီး ဘီလီယံ ၁၀၀ ချေးငွေအပေါ် ခရီးသွားကဏ္ဍမှ လုပ်ငန်းရှင် အများစုက မျှော်လင့်တကြီး စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
“အရင်တုန်းက ဘာမှ လုပ်မပေးခဲ့တာမျိုးထက်စာရင် အစိုးရဘက်က ခုလိုလုပ်ပေးတာကိုက မျှော်လင့်ချက် ရှိတယ် လို့ ခံစားရပါတယ်။ ကောက်ရိုးတမျှင်ပေါ့။ ထုတ်ချေးမယ့် ဘီလီယံ ၁၀၀ မှာ ကဏ္ဍတွေကလည်း အများကြီးပါနေတော့ ဘယ်လောက် အထိ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမယ်၊ မရှိဘူးဆိုတာကတော့ ပြောဖို့ စောပါဦးမယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏ အတွင်းရေးမှူး ဦးသန့်ဇော်က ပြောသည်။
တောင်သမန်အင်းအတွင်း ငှက်လှေမောင်းသူ ကိုနိုင်က “မလာနိုင်သေးတဲ့ ဧည့်သည်ကို မျှော်နေမယ့်အစား မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် လုပ်စရာရှိတာ ရှာကြံ လုပ်စားရတာပေါ့ဗျာ။ အလုပ်မရှိတော့တဲ့ အခါကျလည်း သူများဆီ ချေးငှား ပေါင်နှံစားရတာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ ခရီးသွားကဏ္ဍလုပ်ငန်း ယာယီရပ်တန့်နေချိန် မိမိလုပ်ငန်းများအလိုက် ဝန်ထမ်းများအား အရည် အသွေး မြင့် သင်တန်းများပေးခြင်း၊ ခရီးစဉ် နေရာသစ်များ ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အရည်အသွေး ပြည့်မီသော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည်ဟု မန္တလေးတိုင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစန်းယုက ပြောသည်။
ထိုမှသာ ယခုလို အကျပ်အတည်းကာလအား အခွင့်အလမ်းအဖြစ် အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အနေ အထားအား ကြံ့ကြံ့ခံကာ အခြေအနေကောင်းတခုအား စောင့်ဆိုင်းသွားရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ကိုဗစ်အလွန် အနာဂတ်ခရီးသွားကဏ္ဍတွင် ဧည့်သည်များ၏ အမူအကျင့်များ၊ လိုအပ်ချက်များလည်း ပြောင်းလဲ လာနိုင်မည်ဖြစ်သလို အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များ၊ အရည်အသွေး ပြည့်မီသော ဝန်ဆောင်မှုများအား ပေးနိုင်ရန် ခရီးသွားကဏ္ဍရှိ လူများအားလုံးက အဆင့်သင့်ဖြစ်ထားရန် လိုအပ်သည်ဟုလည်း ၎င်းက ထောက်ပြသည်။
]]> မန္တလေး ပဲနှမ်းကုန်စည်ဒိုင် ယာယီပိတ်မည် https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2020/03/24/218973.html Tue, 24 Mar 2020 10:42:33 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=218973
မန္တလေးအပါအဝင် အထက်မြန်မာ၏ အဓိက ပဲနှမ်းဈေးကွက် တခုဖြစ်သော မန္တလေး ပဲနှမ်းကုန်စည်ဒိုင် တွင် နေ့စဉ်အရောင်းအဝယ် လုပ်နေသော ကုန်သည်၊ ပွဲစားအရေ အတွက် ၁ ထောင်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီး၊ မန္တလေးမှ တ ဆင့် ကုန်းလမ်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ အဓိက တင်ပို့နေသော ဈေးကွက်တခုလည်း ဖြစ်
The post မန္တလေး ပဲနှမ်းကုန်စည်ဒိုင် ယာယီပိတ်မည် appeared first on ဧရာဝတီ.
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကြောင့် မန္တလေး ပဲနှမ်းကုန်စည်ဒိုင် မတ်လ၂၅ ရက်မှ စတင်၍ ယာယီပိတ်မည်ဖြစ် ကြောင်း ပွဲစား ကုန်သည် စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်း (မန္တလေး ပဲနှမ်း ကုန်စည်ဒိုင်)က ယနေ့သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
ကုန်စည်ဒိုင် ပြန်ကြားရေး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချွန်က “အစိုးရက ဒီရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကင်းရှင်းပြီ၊ စိတ်ချရပြီဆိုမှ ပြန်ဖွင့်မှာ ပါ။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တော့ ဧပြီလကုန်အထိ ပိတ်မှာပါ” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ကုန်စည်ဒိုင် ပြန်လည် ဖွင့်မည့်ရက်အတိအကျအား အသင်းတိုက် သင်ပုန်းနှင့် အသင်း Facebook Page တွင် ကြေ ညာပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မန္တလေး အပါအဝင် အထက်မြန်မာ၏ အဓိက ပဲနှမ်းဈေးကွက် တခုဖြစ်သော မန္တလေး ပဲနှမ်းကုန်စည်ဒိုင်တွင် နေ့စဉ် အရောင်းအဝယ် လုပ်နေသော ကုန်သည်၊ ပွဲစားအရေအတွက် ၁ ထောင်ဝန်းကျင်ခန့် ရှိပြီး မန္တလေးမှတဆင့် ကုန်း လမ်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ အဓိက တင်ပို့နေသော ဈေးကွက်တခုလည်း ဖြစ်သည်။
မန္တလေး ကုန်စည်ဒိုင်တွင် အသင်းသား၊ ကိုယ်စားလှယ် အပါအဝင် ၃ ထောင်ဝန်းကျင်ခန့် ရှိပြီး ယခင်လမှ စတင်၍ ဒိုင်အတွင်း လာရောက် အရောင်းအဝယ် လုပ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံသား ဧည့်သည်အသစ်များ ဝင်ရောက်ခွင့် ကန့်သတ်ခဲ့ ကြောင်းလည်း သိရသည်။
]]> မန္တလေးကျောက်ဝိုင်းနှင့် စားသောက်ဆိုင်များ ယာယီပိတ်မည် ‌ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/24/218909.html Tue, 24 Mar 2020 06:32:32 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=218909
ကန်တော်နဒီဆေးရုံနှင့် နဒီမြန်မာ ဟိုတယ်တို့အား သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ထပ်မံတိုးချဲ့ရန် လိုအပ် လာပါက အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် တရားစခန်းများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် များရှိ အဆောက်အဦများ အား စတင်ပြင်ဆင်နေပြီ
The post မန္တလေးကျောက်ဝိုင်းနှင့် စားသောက်ဆိုင်များ ယာယီပိတ်မည် ‌ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> မန္တလေးရှိ နိုက်ကလပ်၊ ဘားများ ယနေ့မှစ၍ ပိတ်ရမည် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/19/218492.html Thu, 19 Mar 2020 09:09:24 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=218492
မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိ အထက်ပါနေရာများအား ယနေ့ညမှ စတင်၍ ပိတ်ရန် တိုင်းအထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများသို့ ညွှန်ကြားပြီးဖြစ်ကာ မတ်လ ၁၉ ရက်မှ ဧပြီလကုန်အထိ ယာယီ ပိတ်ရမည်ဟု သိရသည်။
The post မန္တလေးရှိ နိုက်ကလပ်၊ ဘားများ ယနေ့မှစ၍ ပိတ်ရမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ကန်တော်နဒီဆေးရုံတွင် သေဆုံးခဲ့သည့် လူနာအမျိုးသမီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မရှိ https://burma.irrawaddy.com/lifestyle/health/2020/03/18/218320.html Wed, 18 Mar 2020 02:48:18 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=218320
The post ကန်တော်နဒီဆေးရုံတွင် သေဆုံးခဲ့သည့် လူနာအမျိုးသမီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မရှိ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> မန္တလေးတွင် သေဆုံးသည့် စောင့်ကြည့် လူနာ ဆေးစစ်အဖြေ မနက်ဖြန်ရမည် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/17/218306.html Tue, 17 Mar 2020 12:46:40 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=218306
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ သတင်းမှားတွေကို မယုံကြည်ဘဲ ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းတွေကို သာ အမြဲစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ မက်ဆေ့ချ်ပေးချင်ပါတယ်။
The post မန္တလေးတွင် သေဆုံးသည့် စောင့်ကြည့် လူနာ ဆေးစစ်အဖြေ မနက်ဖြန်ရမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
မန္တလေးမြို့၊ ကန်တော်နဒီဆေးရုံတွင် တက်ရောက် ဆေးကုသခံယူရင်း အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြင့် ယနေ့သေဆုံး သွားသော လူနာအမျိုးသမီး၏ ဆေးစစ်ချက်အဖြေမှာ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက်အစောပိုင်းတွင် ရရှိမည်ဟု မန္တလေး အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ စုစုဒွေးက ပြောသည်။
“ဆေးစစ်ချက် အဖြေသိရတာနဲ့ အားလုံးကို ပြောမှာပါ။ Negative ဖြစ်ဖြစ်၊ Positive ဖြစ်ဖြစ် ကျမတို့ဘက်က ဘာမှ သတင်းထိန်ချန်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။” ဟု ဒေါက်တာစုစုဒွေးက ယနေ့ညနေပိုင်းက မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး တွင် မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးသူ အမျိုးသမီးမှာ အသက် ၂၂ နှစ် အရွယ် ဖြစ်ပြီး အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသွားခြင်း ဖြစ် ကြောင်း၊ တံတားဦးမြို့နယ်မှ လာရောက်သူဖြစ်ပြီး ယမန်နေ့က မန္တလေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသို့ အသက်ရှု လမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ရောဂါဖြင့် ဆေးကုသမှု ခံယူရန် ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင် ရောဂါ လက္ခဏာ အချို့နှင့် ကိုက်ညီနေသဖြင့် မန္တလေး ကန်တော်နဒီဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်း၍ လိုအပ်သောဆေးကုသမှုများ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးသူသည် ရောဂါဖြစ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ခဲ့သော ခရီးရာဇဝင်မရှိကြောင်း၊ ၎င်းအား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရခြင်းရှိ၊ မရှိ သိရှိရန်အတွက် ဓာတ်ခွဲနမူနာအား ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသား ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) သို့ ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ဓာတ်ခွဲအဖြေ အမြန်ဆုံး ရရှိရန်အတွက် တင်ပြထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာစုစုဒွေးက ရှင်းပြသည်။
ယခုသေဆုံးသူအမျိုးသမီးသည် ကန်တော်နဒီဆေးရုံ သို့ တက်ရောက်ဆေးကုသခံယူရင်း သေဆုံးခဲ့သော ဒုတိယ မြောက်လူနာလည်း ဖြစ်သည်။
မတ်လ ၄ ရက်နေ့ကလည်း မန္တလေးကန်တော်နဒီဆေးရုံ၌ တက်ရောက် ဆေးကုသမှုခံယူနေသော အသက် ၆၈ အရွယ် အမျိုးသမီး ၁ ဦးလည်း သေဆုံးခဲ့ရာ ၎င်း၏ ဆေးစစ်ချက်အဖြေမှာ ရောဂါပိုး မတွေ့ရှိဟု ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“ဒီရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တာ မှန်သမျှကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ညစဉ် သတင်းထုတ်ပြန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ သတင်းမှားတွေကို မယုံကြည်ဘဲ ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေကို သာ အမြဲစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ မက်ဆေ့ချ်ပေးချင်ပါတယ်။”ဟု မန္တလေးတိုင်း အဆုတ်ရောင်ရောဂါ စောင့်ကြည့် စစ်ဆေး ကုသရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ သတင်းပြန်ကြားရေး တာဝန်ုရှိသူ ဒေါက်တာသန်းသန်းမြင့်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
]]> မန္တလေးတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စောင့်ကြည့် လူနာ ၁ ဦး သေဆုံး https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/17/218258.html Tue, 17 Mar 2020 09:50:18 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=218258
အဆိုပါအမျိုးသမီးသည် တံတားဦးမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီး အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါဖြင့် မန္တလေးဆေးရုံကြီးသို့ ဆေးကုသရန် ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟု လတ်တလောသိရ
The post မန္တလေးတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စောင့်ကြည့် လူနာ ၁ ဦး သေဆုံး appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> COVID-19 ကြောင့် ပြည်ပ ခရီးစဉ် ပယ်ဖျက်မှု တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၈ သိန်း နီးပါးရှိလာ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/17/218164.html Tue, 17 Mar 2020 01:30:53 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=218164
လေကြောင်းလိုင်းများသို့ ကြိုတင် စရန်ပေးထားပြီး ဖြစ်သော ခရီးသွား ကုမ္ပဏီများအား ငွေပြန်လည် ထုတ်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းက ဦးဆောင်၍ ယခု သီတင်းပတ်အတွင်း လေကြောင်း လိုင်းများနှင့် ခရီးသွား ကုမ္ပဏီကြား ညှိနှိုင်းပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ
The post COVID-19 ကြောင့် ပြည်ပ ခရီးစဉ် ပယ်ဖျက်မှု တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၈ သိန်း နီးပါးရှိလာ appeared first on ဧရာဝတီ.
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာသို့ သွားရောက်ရန် ပြင်ဆင်ထားသည့် ခရီးစဉ်များကို ပြန်လည် ပယ်ဖျက်လျက်ရှိရာ တန်ဖိုးအားဖြင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈ သိန်းနီးပါးရှိလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (UMTA) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနောင်းနောင်းဟန်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“ခရီးသည် အရေအတွက်နဲ့ ကြည့်ရင် ထောင်ဂဏန်း ကျော်တယ်။ ဒီလို ကမ္ဘာတဝန်း ကပ်ရောဂါ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ခရီးထွက်ဖို့ စိုးရိမ်ကြတဲ့အတွက် ခရီးစဉ်တွေ ပယ်ဖျက်ကြတာ များတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုခရီးစဉ် ဖျက်လိုက်တာ ကြောင့် လေကြောင်းလိုင်းတွေကို စရန် ပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ ခရီးသွား ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ညှိနှိုင်းပေး ဖို့ ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သင်္ကြန် အပါအဝင် နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် ကာလဖြစ်သော မတ်နှင့် ဧပြီလသည် ပြည်တွင်း ခရီးသွား အများစုက အိမ်နီးချင်း ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ စင်ကာပူ စသည့် အာရှဒေသများ အပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံများသို့ သွားရောက် လည် ပတ်မှု အများဆုံး အချိန်ဖြစ်၍ ယခုကာလအတွင်း ထိုသို့ခရီးစဉ် ပယ်ဖျက်သည့်အတွက် ခရီးသွား လုပ်ငန်းအပေါ် ကြီး မားသော ဆုံးရှုံးမှုတခု ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဘန်ကောက် သွားရောက်မည့် အစီအစဉ်အား ပယ်ဖျက်ခဲ့သော မမေအေးသန္တာကြွယ်က “ဒီလထဲမှာပဲ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ဘန်ကောက်ကို သွားဖို့ ရှိတာ။ ရက်ရှည်ခရီးစဉ် ဖြစ်တာရယ်၊ ထိုင်းလေဆိပ်က ဝန်ထမ်း ကိုတောင် ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးခံလိုက်ရတယ် ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ စိုးရိမ်ပြီး ခရီးစဉ်ကို ဖျက်လိုက်တာပါ” ဟု ဧရာ ဝတီကို ပြောပြသည်။
ထိုသို့ ခရီးစဉ်များ ပယ်ဖျက်ခြင်းအတွက် လေကြောင်းလိုင်းများသို့ ကြိုတင် စရန်ပေးထားပြီး ဖြစ်သော ခရီးသွား ကုမ္ပ ဏီများအား ငွေပြန်လည် ထုတ်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းက ဦးဆောင်၍ ယခု သီတင်း ပတ်အတွင်း လေကြောင်းလိုင်းများနှင့် ခရီးသွား ကုမ္ပဏီကြား ညှိနှိုင်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ New Motion ခရီးသွား ကုမ္ပဏီမှ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ ဦးဇော်ထိုက်က “Impact ကတော့ အကြီးအကျယ် ထိတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ကလည်း ဒီအခြေအနေမှာ ခရီးစဉ်တွေ ထွက်ဖို့ အဆင်မပြေတော့ ရာနှုန်းပြည့် Cancel လုပ်လိုက်ရတယ်။ အဲဒါကြောင့် လေကြောင်းလိုင်းတွေကို စရန်ပေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေတော့ ပြန် လိုချင်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါကလည်း လေကြောင်းလိုင်း တခုချင်းစီရဲ့ပေါ်လစီပေါ်မှာ မူတည်တော့ ဘယ်လို လာမလဲတော့ အတိအကျ ပြောဖို့ စောပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖြေတခု ရအောင်တော့ ကျနော်တို့ ညှိနှိုင်းရမှာပေါ့” ဟု ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
မြန်မာ အမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်းမှ အကြီးတန်း တာဝန်ရှိသူတဦးက “ကျနော်တို့ လေကြောင်းလိုင်းကနေ Group Booking လုပ်ထားဆိုရင်တော့ ပေးထားတဲ့ စရန်ကို အပြည့် ပြန်ပေးပါတယ်။ ခရီးသည် တဦးချင်း ဆိုရင်တော့ Fare Rule (လေယာဉ် လက်မှတ် နောက်ကျောတွင် ယာဉ်စီးခ အတွက် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း) အတိုင်း ပြန်ပေး မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေကြောင်းလိုင်း တခုနဲ့တခုရဲ့ ပြန်အမ်းငွေ သတ်မှတ်ချက် (Refund Policy) ကတော့ တူမှာ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။
“ဒီလို အခြေအနေမှာ ခရီးသွား ကဏ္ဍတခုလုံး အရမ်း အထိနာကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ဖြစ် နေတာဆိုတော့ ကျနော်တို့လည်း စောင့်ကြည့်ရုံအပြင် ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ” ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောသည်။
New Motion ခရီးသွား ကုမ္ပဏီမှ ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ ဦးဇော်ထိုက်က “ဒီတိုင်း ရေရှည် ဆက်ဖြစ်နေရင် Outbound (မြန်မာနိုင်ငံသားများက ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားလာမှု) ခရီးသွား ကျဆင်းမှုနှုန်းက ပိုများလာမယ်။ ဒါကလည်း နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အနေအထား ဆိုတော့ ခန့်မှန်းရခက်သလို အခြေအနေတွေ တည်ငြိမ်သွား ရင်တောင် ခရီးသွားချင်စိတ် ပြန်ဖြစ်လာအောင် အတော်လုပ်ယူရလိမ့်မယ်” ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၀ ကျော်တွင် ကူးစက်ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသလို သေဆုံး သူ ပေါင်း ၅၃၀၀ ကျော်ရှိလာသည့်အတွက် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် အတွင်းက ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ (WHO) က ကိုရို နာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ဖြစ်ပွားမှုအား “ကမ္ဘာကပ်ရောဂါ” အဖြစ် စတင် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံအများစုက ၎င်းတို့ နိုင်ငံအတွင်း ပြည်ပမှ ဝင်ရောက်လာမည့် ခရီးသွားများအား သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများအလိုက် ပြည်ဝင်ခွင့် ကန့်သတ် ခြင်း၊ နိုင်ငံအတွင်း ရောက်ရှိသည်နှင့် ၁၄ ရက် ကျန်းမာရေး စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း စသည့် စည်း ကမ်းများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
]]> မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား အထက်တန်းရထားခရီးစဉ် ပြေးဆွဲမည် https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2020/03/16/218139.html Mon, 16 Mar 2020 10:25:06 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=218139
ပုံမှန် မန္တလေးမှ နေ့လည် ၁ နာရီ စတင်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပြီး မြစ်ကြီးနားသို့ နံနက် ၇ နာရီ တွင် လည်းကောင်း၊ မြစ်ကြီးနားမှ နေ့လည် ၁ နာရီခွဲမှ စတင်ထွက်ခွာကာ မန္တလေးသို့ နံနက် ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ဆိုက်ရောက်မည်
The post မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား အထက်တန်းရထားခရီးစဉ် ပြေးဆွဲမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ခရီးစဉ်အား ကိုးရီးယားနိုင်ငံထုတ် လေအိတ်ရထားတွဲများဖြင့် မတ်လ ၂၁ ရက်မှ စတင်၍ နေ့စဉ်ပြေးဆွဲတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာမီးရထားသွားလာရေး/တိုင်း (မန္တလေး)မှ သိရသည်။
အဆိုပါ လေအိတ်ရထား ခရီးစဉ်အတွက် လက်မှတ် ၁ စောင်လျှင် ၂ သောင်းကျပ် သတ်မှတ်ထားပြီး အထက်တန်းတွဲ သာ ပြေးဆွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း ပုံမှန် မန္တလေးမှ နေ့လည် ၁ နာရီ စတင်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပြီး မြစ်ကြီးနားသို့ နံနက် ၇ နာရီ တွင် လည်းကောင်း၊ မြစ်ကြီးနားမှ နေ့လည် ၁ နာရီခွဲမှ စတင်ထွက်ခွာကာ မန္တလေးသို့ နံနက် ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ဆိုက်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အရင် ရထားခရီးစဉ်တွေထက် စီးနင်းချိန် မကွာပေမယ့် ဒါက လေအိတ် အထက်တန်းတွဲတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ခရီးသွားတွေ သက်တောင့်သက်သာ၊ အေးအေးလူလူနဲ့ စီးနင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးစဉ် အချိန်ရွှေ့တယ် ဆိုတာ ထက် အရင်က ဒီရထားတွေက မရှိတော့ ရှိတဲ့ရထားတွေရဲ့ ဝင်ချိန်ထွက်ချိန်ရယ်၊ ခရီးသည်တွေ အဆင်ပြေမယ့် အချိန်ရယ်ကို တွက်ပြီး ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဌာန လက်ထောက် အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးနေလင်းအောင် က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
လက်ရှိ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ရထားခရီးစဉ်အတွက် ရထား ၅ စင်း ပြေးဆွဲလျက်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံထုတ် လေအိတ် ရထားတွဲများဖြင့် ပြေးဆွဲလျက် ရှိသည်ဟု မြန်မာမီးရထားသွားလာရေး/တိုင်း (မန္တလေး) မှ သိရသည်။
]]> မန္တလေးရှိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စောင့်ကြည့်လူနာ ၅ ဦး ပိုးမတွေ့၊ ကျန်လူနာများ အဖြေစောင့်ဆဲ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/13/217905.html Fri, 13 Mar 2020 12:06:49 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=217905
စောင့်ကြည့်လူနာ ၁၂ ဦးအနက် ၁၁ ဦးမှာ မန္တလေး ကန်တော်နဒီဆေးရုံတွင်လည်းကောင်း၊ ၁ ဦးမှာ ကုတင် ၃၀၀ သင်ကြားရေးဆေးရုံတွင် လည်းကောင်း ထားရှိ၍ လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိသည် ဟု သိရသည်။
The post မန္တလေးရှိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စောင့်ကြည့်လူနာ ၅ ဦး ပိုးမတွေ့၊ ကျန်လူနာများ အဖြေစောင့်ဆဲ appeared first on ဧရာဝတီ.